ဦးဂျာရစ်ကို မေးလို့ဖြေ - News @ M-Media
in သရော်စာ — November 15, 2014
နိုဝင်ဘာ ၁၅ ၊ ၂၀၁၄
မေး။ ။ ဦးဂျာရစ် ရေ အခုတစ်လောကြားနေရတဲ့ သတင်းတွေက စိတ်ထိခိုက်စရာတွေ ချည်းပဲနော်။ ဘာတဲ့ သာသနာရေး ဝန်ကြီးဦးဆန်းဆင့်ကို လာဒ်စားမှု၊ အလွဲသုံးစားမှု ပုဒ်မတွေတပ်ပြီး ထောင် (၁၃) နှစ်ချလိုက်ပြီဆိုတဲ့ သတင်း၊ သတင်းထောက်ကိုပါကြီး အသတ်ခံရတဲ့သတင်း၊ မီဒီယာသမားတွေကို ထောင်ချလိုက်ပြန်တဲ့သတင်း၊ အိုကွယ် အနိဌာရုံသတင်းတွေချည်းပဲ။ ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်နိုင်ငံသား အချင်းချင်းတွေကြတော့ မညှာမတာကွယ် သူ့ပြည်မှာမွေးပြီး ကိုယ့်ပြည်မှာ လုပ်ချင်တာတွေ အကုန်ဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေကိုတော့ ဘယ်တရားမှ မစီရင်ပါလားကွယ်တို့ရယ်။
ဖြေ။ ။ ဒါကဒီလိုရှိတယ် တောကမိဂျမ်းစိန်ရယ် ဥပဒေဆိုတာ ကျောသား ရင်သားမခွဲခြားဘူးဆိုတာ သက်သေပြတဲ့သဘောပါ။ မြန်မာလူမျိုးတွေ ဆိုတော့ မြန်မာစကားပုံတွေအတိုင်း ကျင့်သုံးကြတာပါ။ မိဂျမ်းစိန်ကြားဖူးတယ်မလား။ “ဆန်ရင်းနာနာဖွတ်” ဆိုတဲ့စကားပုံ၊ “အိမ်ကြက်ချင်း အိုးမဲသုတ်” တို့၊ “အမေကျော်ဒွေးတော်လွမ်း” တို့ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့။ အဲ…အဲ ခုတစ်လောတောင် စကားပုံအသစ်တစ်ခုထွက်နေဆိုပဲ။ မိဂျမ်းစိန်ကြားမိသေးလားဘာတဲ့… “အဖေ ပါပါးလို့သာခေါ် မြေပေါ်မြေအောက်လို သလိုအပြီးရောက်မယ်” …တဲ့။ မကြားဖူးသေးရင်မှတ်ထားနော်။
မေး။ ။ ဦးဦးဂျာရစ်ရေ အားကစား သတင်းတွေကြားရ၊ ဖတ်ရတာသိပ်ကိုဂုဏ်ယူစရာပဲဗျာ။ ခုဆိုရင် ကမ္ဘာမှာမြန်မာဟေ့လို့ လက်မထောင်နိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့ဘောလုံးသမား လူငယ်လေးတွေ၊ လက်ဝှေ့သမား လူငယ်တွေ၊ အားကစားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူငယ်တွေတော်တော်ထူးချွန်နေကြပြီးနော်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တစ်ခုဘဝင်မကျဘူးဗျ။ ဘာလဲဆိုတော့ စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘက်မှာ လူငယ်တွေနေရာမရကြတာ ဘာကြောင့်လဲ။
ဖြေ။ ။ အော်… မောင့်ရင့်နှယ် အတွေးကလဲခေါင်ရန်ကောကွယ် လူငယ်တွေပါဆိုမှ လူကြီးမှ မဟုတ်တာ။ စီးပွားရေးတို့ နိုင်ငံရေးတို့ဆိုတာ လူကြီးအလုပ်… လူကြီးအလုပ်။
မေး။ ။ ဦးရေ ကြားပြီးပြီလား။ တောင်အာဖရိက လက်ရွေးစင်ဂိုးသမားဆန်ဇိုမီယီဝါကို သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်သွားတဲ့သတင်းလေးဘာတဲ့။ သူတို့နိုင်ငံကရဲတွေများ ပြည်သူတွေကို ဂရုစိုက်ပုံပြောပါတယ်။ တရားခံကို သတင်းပေးနိုင်ခဲ့ရင် ဒေါ်လာ (၁၄၀၀၀) ကြီးများတောင်ချီးမြှင့်ဦးမယ်တဲ့။ ကျုပ်တို့နိုင်ငံမှာတော့ ဘယ်သူ့ကို ဘယ်သူကပဲသတ်သတ်၊ ဘယ်သူကဘယ်သူ့ကိုပဲ ရိုက်ရိုက်၊ ဘယ် ကလေးသူငယ်ကို ဘယ်သူကပဲ မတရားကျင့်ပြီးသတ်သတ်၊ ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုပဲမတရားမှုတွေလုပ်ပြီး ဘယ်လိုပဲ ရက်စက်ရက်စက်။ ဘယ်သူတွေကမှ ထိထိရောက်ရောက် အရေးမယူဘူး။ အဲဒါဘယ်လိုကြောင့်လဲဟင်။
ဖြေ။ ။ မီးငယ်ရယ် အပြီးစလွယ်ဖြေတယ်လို့တော့ မထင်ပါနဲ့နော်။ မီးငယ်ရဲ့မေးခွန်းတွေက “ညာ” မပါဘဲ ဘယ်တွေများနေတော့ ဆရာကြီးမင်းသင်္ခအလုံး (စကား) ခဏဌားပြောချရင် ဘာ. ဘာ. ဘာမှမသိပါဘူးကွယ်။